အိတ်ကပ်ထဲ ဒေါ်လာ (၂၀) ပဲရှိတဲ့ဘဝကနေ DJ Khaled ဖြစ်တဲ့အထိ ကြိုးစားလာသူ
13 Mar 2018 . 6:11 PM
DJ Khaled ဆို နိုင်ငံတကာ ဂီတနားဆင်တဲ့သူတွေက ပြောစရာမလို သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ DJ Khaled ရဲ့ နာမည်ရင်းကတော့ Khaled Mohamed Khaled ဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ Music Producer တစ်ယောက်၊ DJ တစ်ယောက်၊ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်ထားသူပါ။
သူဟာ နာမည်ကြီး “The Ellen DeGeneres Show” မှာ မတ်လ ၂၀၁၆ မှာ ပြောကြားခဲ့တာက သူဟာ အကောင်းစားသီချင်းတွေ အများကြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး Jay-Z ဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပါပါတယ်။
A post shared by DJ KHALED (@djkhaled) on Feb 29, 2016 at 9:45am PST
သူ့ရဲ့ “Top Off” သီချင်းဟာဆိုရင် Jay-Z တင်မဟုတ်ဘဲ Future နဲ့ Beyonce လို နာမည်ကြီးကြယ်ပွင့်တွေပါ ပါဝင်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသက်ဟာ အခုဆို ၄၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာဆိုရင်လည်း ဆယ်လီတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ Instagram မှာတင် သူကို Follow ထားသူ ၉ သန်းရှိပြီး Twitter မှာဆိုရင် လူ ၄သန်းလောက်က Follow ထားပါတယ်။
အခုလို အောင်မြင်နေတဲ့ Khaled ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာဆိုရင် ပါလက်စတိုင်းကနေ ရွှေ့ပြောင်းအခြေစိုက်လာသူတွေလို့ ပြောရင် အံ့သြကြမှာပါ။ သူ့အဖေဟာ လူးဝစ်စီးယားနားပြည်နယ်ကို အိတ်ကပ်ထဲမှာ ဒေါ်လာ ၂၀ တည်းနဲ့ ရောက်လာခဲ့ပြီး အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ကို ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ Khaled ကိုတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ နယူးအောလန်းမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး Khaled လူမှန်းသိတတ်စတည်းက သူ့မိဘနှစ်ပါးဟာ တစ်ပတ်ကို ၇ရက်၊ တစ်ရက်ကို ၂၄ နာရီနီးပါးလောက်လို့ ထင်ရအောင်ကို နားချိန်မရှိ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ Khaled က ဖောက်သည်ချခဲ့ပါတယ်။
Khaled ဟာ အသက် ၁၃ နှစ်သားတည်းက သူတို့ ကားဂိုဒေါင်လေးထဲမှာ DJ တီးတဲ့အလုပ်ကို စလုပ်နေပြီး သူ့မှာရှိတဲ့ ကီးဘုတ်တစ်ခု၊ ဓာတ်ပြားစက်၊ ဒရမ်စက်တစ်ခုနဲ့တင် စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကလပ်တွေမှာ DJ လိုက်လုပ်ပြီး တစ်ပတ်ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်ပဲ ရရှိခဲ့တာပါ။ ကြမ်းပြင်မှာ ဒီတိုင်းအိပ်ရပြီး ပရိဘောဂပစ္စည်းဆိုတာ ရှိကို မရှိပါဘူးတဲ့။
မီယာမီမြို့ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး သူ့အဖေလိုပဲ အိတ်ကပ်ထဲမှာ ဒေါ်လာ ၂၀တောင် မပြည့်တဲ့ ငွေနဲ့ပါ။ အဲ့ဒီမှာ DJ အနေနဲ့ ခြေကုတ်ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဝင်ငွေရအောင် သူ့ကို ခေါ်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ လိုက်ပြီး တီးပါတယ်။ သူ့ရည်းစားကောင်မလေးရဲ့အမေအိမ်နဲ့ သူ့ကားပေါ်မှာ တလှည့်စီအိပ်ပြီး ရုန်းကန်နေခဲ့ပါတယ်၊တစ်ခါတလေမှာတော့ စတူဒီယိုမှာပဲ အိပ်ရတာပေ့ါ။
#TBT 2002 mix show power Summit @iamlylette hey remember me Bless up STARTED ! I NEVER GAVE UP! 🔑
A post shared by DJ KHALED (@djkhaled) on Jan 11, 2018 at 1:58am PST
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ သတင်းဟာ တဖြည်းဖြည်းကျော်ကြားလာပြီး အဲဒီခေတ်က လူမှုကွန်ရက်တွေ မပေါ်သေးတော့ လူသတင်းလူချင်းဆောင်ပြီးပဲ သူ့အကြောင်းတွေ ပြောလာကြပါပြီ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တနိုင်ငံလုံး အသိအမှတ်ပြုတဲ့ We Takin’ Over အယ်လ်ဘမ်ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး Lil’ Wayne ၊ Birdman နဲ့ Akon တို့လို နာမည်ကြီးတွေ ပါဝင်သီဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းရွှေ့ပြောင်းအခြေချမိဘနှစ်ပါးက မွေးဖွားလာတဲ့၊ ငယ်ဘဝမှာ လောကဓံမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတဲ့ Khaled ဟာတော့ အခုဆို နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတွေကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးသူနဲ့ လက်ရှိကြွယ်ဝမှု ဒေါ်လာသန်း ၂၀ (Celebrity Network ရဲ့ ဖော်ပြမှုအရ) ပိုင်ဆိုင်တဲ့ DJ Khaled ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
Ref : www.cnbc.com
အိတျကပျထဲ ဒျေါလာ (၂၀) ပဲရှိတဲ့ဘဝကနေ DJ Khaled ဖွဈတဲ့အထိ ကွိုးစားလာသူ
DJ Khaled ဆို နိုငျငံတကာ ဂီတနားဆငျတဲ့သူတှကေ ပွောစရာမလို သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ DJ Khaled ရဲ့ နာမညျရငျးကတော့ Khaled Mohamed Khaled ဖွဈပွီး သူ့ကိုယျသူ Music Producer တဈယောကျ၊ DJ တဈယောကျ၊ အနုပညာရှငျတဈယောကျလို့ သတျမှတျထားသူပါ။
သူဟာ နာမညျကွီး “The Ellen DeGeneres Show” မှာ မတျလ ၂၀၁၆ မှာ ပွောကွားခဲ့တာက သူဟာ အကောငျးစားသီခငျြးတှေ အမြားကွီးထုတျလုပျခဲ့ပွီး Jay-Z ဟာဆိုရငျ သူ့ရဲ့မနျနဂြောဖွဈကွောငျးလညျး ပါပါတယျ။
သူ့ရဲ့ “Top Off” သီခငျြးဟာဆိုရငျ Jay-Z တငျမဟုတျဘဲ Future နဲ့ Beyonce လို နာမညျကွီးကွယျပှငျ့တှပေါ ပါဝငျထားပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အသကျဟာ အခုဆို ၄၂ နှဈရှိပွီဖွဈပွီး လူမှုကှနျရကျမှာဆိုရငျလညျး ဆယျလီတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ Instagram မှာတငျ သူကို Follow ထားသူ ၉ သနျးရှိပွီး Twitter မှာဆိုရငျ လူ ၄သနျးလောကျက Follow ထားပါတယျ။
အခုလို အောငျမွငျနတေဲ့ Khaled ရဲ့ မိဘနှဈပါးဟာဆိုရငျ ပါလကျစတိုငျးကနေ ရှပွေ့ောငျးအခွစေိုကျလာသူတှလေို့ ပွောရငျ အံ့သွကွမှာပါ။ သူ့အဖဟော လူးဝဈစီးယားနားပွညျနယျကို အိတျကပျထဲမှာ ဒျေါလာ ၂၀ တညျးနဲ့ ရောကျလာခဲ့ပွီး အသကျရှငျရပျတညျဖို့ကို ရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။ Khaled ကိုတော့ ၁၉၇၅ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလမှာ နယူးအောလနျးမှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး Khaled လူမှနျးသိတတျစတညျးက သူ့မိဘနှဈပါးဟာ တဈပတျကို ၇ရကျ၊ တဈရကျကို ၂၄ နာရီနီးပါးလောကျလို့ ထငျရအောငျကို နားခြိနျမရှိ အလုပျလုပျခဲ့ရတယျလို့ Khaled က ဖောကျသညျခခြဲ့ပါတယျ။
Khaled ဟာ အသကျ ၁၃ နှဈသားတညျးက သူတို့ ကားဂိုဒေါငျလေးထဲမှာ DJ တီးတဲ့အလုပျကို စလုပျနပွေီး သူ့မှာရှိတဲ့ ကီးဘုတျတဈခု၊ ဓာတျပွားစကျ၊ ဒရမျစကျတဈခုနဲ့တငျ စတငျ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ကလပျတှမှော DJ လိုကျလုပျပွီး တဈပတျကို ဒျေါလာ ၁၀၀ လောကျပဲ ရရှိခဲ့တာပါ။ ကွမျးပွငျမှာ ဒီတိုငျးအိပျရပွီး ပရိဘောဂပစ်စညျးဆိုတာ ရှိကို မရှိပါဘူးတဲ့။
မီယာမီမွို့ကိုတော့ ၁၉၉၄ ခုနှဈမှာ ရောကျရှိလာခဲ့ပွီး သူ့အဖလေိုပဲ အိတျကပျထဲမှာ ဒျေါလာ ၂၀တောငျ မပွညျ့တဲ့ ငှနေဲ့ပါ။ အဲ့ဒီမှာ DJ အနနေဲ့ ခွကေုတျရအောငျကွိုးစားခဲ့ပွီး ဝငျငှရေအောငျ သူ့ကို ချေါတဲ့ နရောတိုငျးမှာ လိုကျပွီး တီးပါတယျ။ သူ့ရညျးစားကောငျမလေးရဲ့အမအေိမျနဲ့ သူ့ကားပျေါမှာ တလှညျ့စီအိပျပွီး ရုနျးကနျနခေဲ့ပါတယျ၊တဈခါတလမှောတော့ စတူဒီယိုမှာပဲ အိပျရတာပေ့ါ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ သတငျးဟာ တဖွညျးဖွညျးကြျောကွားလာပွီး အဲဒီခတျေက လူမှုကှနျရကျတှေ မပျေါသေးတော့ လူသတငျးလူခငျြးဆောငျပွီးပဲ သူ့အကွောငျးတှေ ပွောလာကွပါပွီ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တနိုငျငံလုံး အသိအမှတျပွုတဲ့ We Takin’ Over အယျလျဘမျဟာ ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာ ထှကျရှိလာခဲ့ပွီး Lil’ Wayne ၊ Birdman နဲ့ Akon တို့လို နာမညျကွီးတှေ ပါဝငျသီဆိုခဲ့ပါတယျ။
ပါလကျစတိုငျးရှပွေ့ောငျးအခွခေမြိဘနှဈပါးက မှေးဖှားလာတဲ့၊ ငယျဘဝမှာ လောကဓံမြိုးစုံကွုံခဲ့ရတဲ့ Khaled ဟာတော့ အခုဆို နာမညျကွီးအဆိုတျောတှရေဲ့ သီခငျြးတှကေို ဖနျတီးထုတျလုပျပေးသူနဲ့ လကျရှိကွှယျဝမှု ဒျေါလာသနျး ၂၀ (Celebrity Network ရဲ့ ဖျောပွမှုအရ) ပိုငျဆိုငျတဲ့ DJ Khaled ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။